WOWOW Pot Kuzadza Tap pamusoro Stove Chrome
musha / Kicheni Faucets / Pot Yekuzadza Faucets / WOWOW Pot Yekuzadza Faucet Pamusoro Pechitofu Chrome
kitchen stove pot filler faucet zvinhu ndeye 304 isina stell faucet muviri, yakakwira mhando aerator, imwe-yekubata switch iri nyore kushanda, huremu hwizere hwakaramba kutemwa makona, zvizere accessories
2311200C yekuraira mirairo
Chrome poto yekuzadza tap 2311200C
Paunenge uchigadzira yako itsva kicheni, zvakanaka kuti iwe unogona kuigadzira zvachose kubva kutanga. Iwe unogona kufunga nezvese functionalities iwe yaunoshuvira uye yaunoda kuti yako yekicheni chiitiko ive iyo yakanaka. Ikicheni ndeyemhuri dzakawanda nzvimbo iyo iwe yaunoshandisa yakawanda yenguva yako kana iwe uri pamba. Saka iwe zvirinani gadzira kicheni yekurota inozadzisa zvese zvaunoda uye zvaunoda, zvako nemhuri yako. Sezvo iwe unogadzira kicheni kubva pakutanga, chinhu chikuru ndechekuti iwe unogona kunyatsoita chero chinhu. Hapana kana miganhu. Zvakanaka, bhajera nekuchenjera zvimwe. Nguva zhinji iwe unongogadzira kicheni yako yemaroto, uye zvichienderana nemutengo uye bhajeti rako chairo, unotanga kugadzirisa zvinhu zvekugadzira
inokodzera bhajeti yako. Mubvunzo ndewekuti ungaite sei kuti ive yakakodzera kune yako bhajeti. Iwe haudi kudzikisira pane zvinhu zvakanyanya kukosha kwauri. Nezve zvigadzirwa uye kupera kwekicheni yako, kunogona kuve nemisiyano mikuru maererano nemutengo. Paunotarisa mutsauko uripo pakati pedzimwe nzira pachako, dzimwe nguva dzinotomboonekwa. Nenzira iyi iwe unogona kuchengetedza pamitengo smartly. Kune rimwe divi haufanirwe kukanganisika pane mhando yeyako yakakosha kicheni michina. Ipapo zvakachipa zvingaite kunge zvichidhura pakupedzisira. Izvo zvinofanirwa uye zvinogona kudzivirirwa nguva dzese. Iwe unongofanirwa kutsvaga mutengesi uyo anogona kukuunura iwe wakanakisa kukosha wemari. WOWOW ndiye mutengesi!
Inoshanda chrome pombi yekuzadza tap
Iyo pombi yekuzadza pombi ndeyekuita mukicheni yako inogona kuita kuti hupenyu hwako hwekicheni huve nyore. Sezvo vasiri vanhu vazhinji vane rudzi urwu rwemidziyo yekukicheni, kushandiswa hakusati kwawanda parizvino. Nekudaro, inopa pundutso mukicheni yako uye inodzivirira kutakura zvinhu zvinorema kunge mapoto akazadzwa nemvura. Nechrome pombi yekuzadza pombi yeWOWOW unogona kuzadza mapoto ako nemvura ivo vatove pachitofu. Nenzira iyi haufanire kutakura idzi hari kubva kukicheni kunyura kune chitofu kunobika mvura. Kunyanya kana iwe uine maoko asina maoko kana maoko, kana kungoshaya simba, ichi chrome pombi yekuzadza pombi inogona kuita kuti hupenyu hwako huve nyore kwazvo.
Neyechrome pombi yekuzadza pombi unogona kuzadza mapoto emvura ivo vari pachitofu chekicheni. Hazvina mhosva kuti moto watobvira here, kana paine mamwe mapani emapoto ari kubheka uye achibika. Sezvo chrome pombi yekuzadza pombi yakagadzirwa nesimbi yepamusoro? Naizvozvo iyi chrome pombi yekuzadza pombi inoshanda kwazvo uye inoshamisa kuwedzera mukicheni yako.
Kukosha kwemari chrome pombi yekuzadza tap
Sezvambotaurwa pamusoro apa, WOWOW inokupa iwe yakakosha kukosha yemari iwe yaunogona kuwana mumusika. Iyi inoshamisa chrome pombi yekuzadza tap inokwikwidza inogona kukwikwidza ne chero A-brand sezvo inopa yakafanana kana kunyange iri nani mhando, uye zvakadaro inopiwa nemutengo unodhura. Mitengo yeA-brand chrome pombi yekuzadza mapombi inogona kupetwa katatu kana kutonyanya kudhura. WOWOW inoratidza nekudzokorora kuti mhando dzemitengo idzi hadzidiwi zvachose. Naizvozvo WOWOW inokupa iwe yakakoshesa kukosha kwemari neiyi chrome pombi yekuzadza pombi. Hapana mubvunzo kuti zvachose!
Hunhu hweWOWOW hwechrome pombi yekuzadza pombi haina kupokana. Kwete munzvimbo yekupedzisira nekuti WOWOW inoshandisa yakakwirira? Mhando zvigadzirwa senge stainless simbi uye yakakwirira-mhando chrome kupedzisa. Iwe unoona mhando nekukasira. Nehuremu hweisingasviki makumi matanhatu iwe unonzwa kuti yakagadzirwa nesimbi dzakasimba. Iyi chrome pombi yekuzadza pombi inoramba iripo kwemakore mazhinji, uye iwe unogona zvakare kubatsirwa kubva kune kusagadzikana-isina-kuenderera mberi kwekuita kweichi chrome pombi yekuzadza tap. Iyo chrome pombi yekuzadza pombi zvakare yakagadzirirwa neNeoperl aerator. Izvi zvinopa kuramba kuchimanikidzwa, uye kuyerera kwemvura nguva dzose. Iyo aerator inovimbisa kushomeka kupaza, uye inodonha-isina uye inodonha-chiratidzo chemvura ruzivo.
Svitsa chrome pombi yekuzadza tap
Iyi chrome pombi yekuzadza pombi yakagadzirwa zvine hungwaru kuti irege kutora chero nzvimbo yakadikanwa mukicheni yako décor. Nekupeta iyi yakatambanudza chrome pombi yekuzadza pombi, unogona kuiisa nyore kumadziro kumashure kwesitofu. Iyo chrome pombi yekuzadza pombi ine ruoko rwakakomberedza ruoko. Nenzira iyi inogona kuchengetwa minimalistically, uye zvakadaro ine refu kusvika kana yakatambanudzwa zvizere. Nekureba kwayo kwemasendimita makumi maviri neshanu kubva pamadziro, unogona kunyatso kusvika kukona yega yega yekicheni kako.
Nemawoko maviri iwe unogona kuseta chrome pombi yekuzadza pombi nyore pasina kubhuroka zvachose. Izvi zvinopawo kuchengetedzwa kwakawedzerwa, sezvo vamwe vanhu vachitya mhando dzemapaipi. Sezvo pasina kunyura, mvura yakateurwa inogona kungosvetukira pachitofu. Iwe unogona kuvhara iyi chrome pombi yekufaira tapuro neatenzi vharau, pedyo nemadziro. Uye iwe unogona kuvhara pamwe nevharoji pane spout. Inovimbisa rwizi rwakatsiga runonyatso shandira chinangwa chayo. Dziviriro mbiri idzi dzinopa kuchengetedza kwakanyanya. Kana iwe uchida kushandisa iyo chrome pombi yekuzadza tap, iwe unongovhura iyo master valve, uye iwe unoshanda iyi chrome pombi yekuzadza tepi senge chero imwe tepe yekicheni.
Stylish chrome poto yekuzadza tap
Nekuda kwekushongedza chrome yekupedzisa, iyi chrome pombi yekuisa faira inowedzera kuwedzera kune chimiro chekicheni yako. Izvi zvinoratidzira yakakwirira-inoratidzira uye inopenya kubatirira kune yako pombi yekuzadza pombi. Mukusanganiswa ne304 isina chigadzirwa chesimbi muviri, iyi chrome pombi yekuzadza tap inopa chinoshamisa chinzvimbo chekicheni kako maitiro. Kunze kwezvo, iyi chrome pombi yekuzadza pombi haisi-yekuora uye inogara yakashongedzwa uye yakanaka kwemakore. Kwete pasina chinhu WOWOW inokupa iwe-yemakore mashanu waranti nguva pane ino chrome pombi yekuzadza tap. Izvi zvinoratidza kuti WOWOW inovimba nezvechigadzirwa chayo, uye kukosha kwemari yauri kuwana nayo. Izvo zvakanakira chechrome poto yekuzadza tap mune zvishoma:
• Inoshanda pombi yekuzadza tap
• Dhizaini yemazuva ano neyemhando yepamusoro chrome kupedzisa
• Maviri mavhavha
• Maximum svitsa nemaoko maviri anoyerera maoko
SKU: 2311200C Categories: Kicheni Faucets, Pot Yekuzadza Faucets Tags: Chipedzisa, Kicheni Sink Faucet, Wall Mount
Kupeta / 2 Bata / Swing Ruoko
Yekutengesa / Yekudyira / Yekugara / Yemukati / Kicheni